TSDP34356 | Infinite-Electronic.hk ထံမှရရှိနိုင် Electro-Films (EFI) / Vishay TSDP34356 စတော့အိတ် | Infinite-Electronic.hk မှာအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူ TSDP34356
နေအိမ်ထုတ်ကုန်များsensors, Transducersoptical အာရုံခံ - ဓာတ်ပုံ detectors - အဝေးမှ ReceiTSDP34356
B.P.F. Center ကကြိမ်နှုန်း
TSDP34356 PDF ကို Datasheet
TSDP34356 ဒေါင်းလုပ် Datasheet
Electro-Films (EFI) / Vishay TSDP34356 Buy
ထုတ်လုပ်သူ: Hamlin / Littelfuse
ဖေါ်ပြချက်: SOLID STATE TIMER (RECYCLING)
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1557 pcs
ဖေါ်ပြချက်: IC IR RCVR MODULE 38.4KHZ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 50189 pcs
ဖေါ်ပြချက်: RELAY TIME DELAY 5SEC/18MIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1499 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1641 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1552 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 53908 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN PLUG HOUSING 20POS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 121208 pcs
ဖေါ်ပြချက်: EVAL BOARD
ဖေါ်ပြချက်: DUAL MODE TX 5V/9V, 10W QC2.0/3.
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1541 pcs
ဖေါ်ပြချက်: IC IR RCVR MODULE 57.6KHZ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 65905 pcs